Shacabka Soomaaliyeed ee Soomaali State oo go`aan lama filaan ah ka gaaray Diyaaradda Itoobiya.
JIGJIGA(P-TIMES) – Qaar kamid ah Dhalinyarada magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda Soomaali State ee dalka Itoobiya ayaa kulan ay iskugu yimaadeen, waxay ku muujiyeen fal takoorid ah oo ay kala kulmeen shirkada Duulimaadka diyaaradaha ee dalka Itoobiya, taas oo diiday in ay bartaan habka duuliye-nimada diyaaradaha, taas oo qeyb ka ahayd Deeq Waxbarasho oo lasiiyey dhammaan Kilalada ama Ismaamulada dalka Itoobiya.
Ardayda Soomaaliyeed ayay Itoobiya Airlines u diiday in ay bartaan kuliyadda wadida Diyaaradaha, taas oo aysan wax sabab ah ku sheegin, balse loo arkay in aytahay mid Soomaalida horumarkas looga fogeynayo.
Ma jirto ruux Soomaali ah oo ka shaqeeya duulimaadyada dalka Itoobiya ee diyaaradaheeda, halka dhamaan Qowmiyadaha kale oo dhan ay leeyihiin xaquuq Dastuuri ah oo ah in ay Shaqaale kuyeeshaan.
Talaabadan, ayay dhalinyaraddu si adag uga hadleen, waxayna ugu baaqeen Dadka Soomaaliyeed oo dhan meel kasta oo ay joogaan n ay joojiyaan isticmaalka shirkada Itoobiya Airlines si culeys loogu saaro in ay aqbasho Ardayda Soomaaliyeed.
Madaxda Soomaali State ayay ugu baaqeen in ay arrimahan deg deg uga hadlaan oo ay la kulmaan madaxda shirkadan, oo hadda wajahaysa fadeexad xoog leh oo kasoo gaaraysa duuliye sare oo katirsanaa, kaas oo sheegay in aysan diyaaradahaas si wanaagsan u abaabulin.